Mucaaradka Suuriya oo isaga Baxay Mid Kamida Degmooyinka Magaalada Dimishiq.
Tuesday May 16, 2017 - 08:56:35 in Wararka by Super Admin
Kooxaha Mucaaradka ah iyo Nidaamka Bishaar Al-asad ayaa Heshiis ku gaaray in dadka suniyiinta ah gacantooda laga bixiyo Mid kamida xaafadaha ugu waaweyn magaalada dismishiq.
Kumanaan katirsan dagaalyahanada Mucaaradka Suuriya ayaa laga daad gureeyay xaafado katirsan magaalada Dimishiq ee caasimadda wadanka Suuriya kadib heshiis ay lagaareen nidaamka Bishaar Al-asad.
Wararka ka imaanaya Suuriya ayaa sheegaya in degmada Alqaabuun oo kamid ah degmooyinka ugu ballaaran magaalada dimishiq ay dib uqabsadeen ciidamada dowladda Suuriya kadib muddo sanada ah oo ay dagaallo ka socdeen.
Saraakiil u hadashay kooxaha Kacdoonka Suuriya ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in qeyb ahaan ay faarujiyeen degmada Alqaabuun islamarkaana boqolaal qoys oo shacab ah loo daadgureeyay dhanka gobollada Idlib iyo Xammaah oo kooxaha mucaaradku maamulaan.
Gaadiid Basas ah oo safaf dhaadheer kujira ayaa lagu arkayaa alqaabuun waxaana wali socda daad gureynta, wariyaal ayaa soo sheegay in qorshahan dadka muslimiinta sunniga ah looga barakicinayo guryahooda dimishiq uu qeyb ka yahay heshiiskii Astaan ee dhawaan ka dhacay wadanka Kazakhistaan.
Ragga Firfircoon ee soo tabiya kacdoonka suuriya ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka Ruushka iyo kuwa Bashaar al-asad ay si aan kala sooc laheyn bilihii lasoo dhaafay uduqeynayeen degmada alqaabuun taas oo ugu dambeyntii keentay in xoogaga kacdoonka isdhiibaan.
Dadka qaar ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid khiyaano ah marka loo eego muhiimadda ay xaafadda alqaabuun uleedahay kacdoonka wadanka ka socda iyo heshiisyada ay mucaaradku dibadda kusoo saxiixeen.
Musalsalka Barakicinta shacabka sunniga ah iyo dhulalka muslimiinta ee loo gacan gelinayo cadawga Nuseyriga ah ayaa sanadadii lasoo dhaafay kusoo noq noqanayay suuriya, horay ayay ciidamada Nidaamka ula wareegeen xaafado ay kamidyihiin Barzah iyo Tashriin oo dhammaantood kawada tirsan magaalada dimishiq.
Maleeshiyaadka shiicada Iiraan iyo Ururka xisbullaah oo xulufo la ah Al-asad ayaa marwalba adeegsada siyaasadda gaajaysiinta iyo dhul gubista taas oo ugu dambeyntii usuurtagelisay xaqiijinta hadaf dhul qabsi iyo mid siyaasadeed.
Liibaaan Jeexoow Cabdi